H&M မှာစျေးသက်သာစွာဝယ်နိုင်မယ့် လျှို့ဝှက်ချက်များ – FemaleWear.net
ခုနောက်ပိုင်းမှာ နာမည်ကြီး brand တွေသာမက H&M, Forever 21, Gap, Zara, Mango စတဲ့ brand တွေလဲ online shop တွေကလဲ လူတိုင်းလက်လှမ်းမှီတဲ့ စျေးနှုန်းတွေနဲ့ online shop တွေမှာလဲ ဝယ်ရတာလွယ်ကူလာပြီလို့ထင်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ H&M မှာ စျေးဝယ်မယ်ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ tip လေးတွေနဲ့ လူသိနည်းတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
H&M မှာအဝတ်အစားတွေဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်ကိုရွေးမှာလား? စျေးချထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်မှာလား ဆိုပြီး ၂မျိုးကွဲသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ပထမဆုံး စျေးသက်သာပြီး ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေကြိုက်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် နည်းလမ်းလေးတွေကိုအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်နော်။ (အက်မင့်လိုလူမျိုးတွေပေါ့လေ sales ချတာပဲချောင်းနေတာ ?)
H&M မှာ အပြတ်ရှင်း sales (clearance?), ရာသီအလိုက် sales နဲ့ ပိတ်ရက် sales (holidays) တွေဆိုပြီး sales အကြီးစားတွေရှိသလို နေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့ sales တွေလဲရှိတတ်တာမို့ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ June, July, September, November နဲ့ December တွေမှာ sales ချတတ်ပါတယ်။ နိုင်ငံအလိုက် sales လုပ်တဲ့ရက်တွေကကွဲသေးတာမို့ ကိုယ်ဝယ်မှာက ဘယ်နိုင်ငံက store လဲဆိုတာကိုတော့ သိထားရပါမယ်နော်။
ကိုယ်မဝတ်တော့တဲ့ အဝတ်အစားတွေ(၃ထည်မှ၅ထည်)ကိုပြန်ပေးပြီး 15% discount ရယူနိုင်ခြင်း။ ဘယ်တံဆိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးနိုင်ပြီး သူတို့က အဲ့ဒီအဝတ်အစားတွေကို နွမ်းပါးတဲ့သူတွေကိုပြန်လှူတာပါ။
Sales တွေထဲမှာမှ ရာသီအကုန်မှာလုပ်တဲ့ sales က စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်တာမို့ အဲ့ဒီရက်တွေမှာ ပိုဝယ်သင့်ပါတယ်။
၂ထည်နဲ့အထက်ဝယ်ရင် ဒါမှမဟုတ် သူသတ်မှတ်တဲ့ပမာဏထိဝယ်ရင် စျေးလျှော့ပေးတာ cupon card တွေပြန်ပေးတဲ့ စနစ်တွေရှိတာမို့ စုပြီးဝယ်တာမျိုးဆိုရင်တော့ သက်သာပါတယ်။
H&M application ကို download လုပ်ရင် ပထမဆုံးဝယ်တဲ့အချိန်မှာ exclusive discount တွေ free shipping တွေရတတ်တာမို့ ထည့်စဉ်းစားသင့်တဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါ။
H&M online app ကနေဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ အပြင်မှာဝယ်တာထက် အထူးလျှော့စျေးတွေရှိတတ်တာမို့ ပိုပြီးသက်သာတတ်ပါတယ်။
ဆိုင်တွေမှာဝယ်ရင် price card ဘားကုတ်ကိုစစ်ကြည့်ရင် အဲ့ဒီပစ္စည်းကဘယ်ချိန် sales ချမယ်ဆိုတာမျိုးသိနိုင်ပါတယ်။
ဆိုင်မှာပဲ ဝယ်တာဖြစ်ဖြစ် online ကနေဝယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဝတ်လို့အဆင်မပြေတာမျိုး တစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ရက်သုံးဆယ်အတွင်းပြန်လဲလို့ရပါတယ်။(မလျှော်ထား၊လုံးဝဝတ်မထားတဲ့ အခြေအနေဖြစ်ရပါမယ်။)
စျေးကိုမကြည့်ပဲ နောက်ဆုံးပေါ်ဖက်ရှင်တွေကိုပဲ ဝယ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ online ကနေဝယ်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ store တွေမှာမတင်ခင် ၂ပါတ်လောက်ကတည်းက online မှာ ပစ္စည်းအသစ်တွေကို စတင်တတ်တာမို့လို့ပါ။ ပြီးတော့ နောက်တစ်ချက်က ကိုယ်ကြိုက်တာတွေ့ထားပြီဆိုရင် လက်မနှေးပဲ ချက်ချင်းဝယ်ထားလိုက်ပါ။ H&M ဟာ ထွက်ပြီးသားဒီဇိုင်းတွေကို ၂ခါပြန်မထုတ်တတ်တဲ့အတွက် နောက်တစ်ခါကိုယ်လိုချင်တာပြန်ရနိုင်ဖို့ မသေချာပါဘူးနော်။ ကိုယ်လိုချင်တာ store မှာမရှိဘူးဆိုရင်တောင် online ကနေတဆင့်ရှာပြီး cart ထဲထည့်ထားတာမျိုး favorite လုပ်ထားတာမျိုးကလဲ တနည်းတဖုံနဲ့ အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်နော်။
Online ကနေဆိုရင်တော့ ထိုင်ရာကမထပဲဝယ်နိုင်ပြီး ပိုပြီးစျေးသက်သာတဲ့ အားသာချက်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် store ကနေဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီးလိုက်ဖက်တာမျိုးကို ရွေးချယ်နိုင်မယ့် အားသာချက်ကိုယ်စီရှိတာမို့ ကိုယ်နဲ့ အဆင်ပြေမယ့်နည်းကို ရွေးနိုင်ဖို့ လက်တို့လိုက်ပြီနော်….
Bra-less fashion နဲ့ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ Bella Hadid